“Small Fry” စာအုပ်မှာ ဖခင်စတိဂျော့ဗ်နဲ့အမှတ်တရတွေကိုဖော်ကျူးထားတဲ့ လီဆာဘရန်နန် – DigitalTimes.com.mm
စတိဗ်ဂျော့ရဲ့ သမီးဖြစ်တဲ့ လီဆာဘရန်နန်ကနေ နောက်လမှာ “Small Fry” လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်းလေးတစ်ခုထွက်ဖို့ရှိပါတယ်။ စာအုပ်မထွက်ခင်မှာပဲ Vanity Fair ကနေ လီဆာဘရန်နန်နဲ့သူမရဲ့ဖခင်နဲ့ခက်ခဲလွန်းတဲ့ relationship တွေ၊ သူ့ဖခင်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့၊ သူမဘဝရဲ့အစခရီးတွေအကြောင်းအသေးစိတ်တွေကနေ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြချက်လေးတစ်ခုကို ထုတ်ဝေလိုက်ပါတယ်။
လီဆာကို ၁၉၇၈ မှာ စတိဗ်ဂျော့နဲ့ ခရစ်ဆန်ဘရန်နန်ကနေမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ြပီး အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်း ဂျော့ဗ်ကအစပိုင်းတုန်းက သူဟာလီဆာ့ရဲ့အဖေဆိုတာကို လက်မခံခဲ့ပါဘူး။ သူမ ၂နှစ်မရောက်ခင်ထိ ဂျော့ဗ်နဲ့လုံးဝမရင်းနှီးခဲ့ဘူးလို့ပြောရမှာပါ။ နောက်မှ ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခိုင်းခဲ့ပြီးမှ လီဆာ့အတွက်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ လီဆာအနေနဲ့ ဖခင်နဲ့တွေ့ခဲ့ရပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယား မန်လိုပန်းခြံမှာ သားအဖ၂ယောက်တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို အသေးစိတ်လေးဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဂျော့ဗ်က ဘရန်နန်ဂျော့ဗ်ဆီခဏခဏလာလည်ပြီး စကိတ်စီးထွက်ကြတာတွေ၊ Porsche တူတူစီးကြတာ၊ ညစာအတူစား ခရီးတိုထွက်ကြတာတွေရှိပေမယ့် သားအဖ၂ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးက ကောင်းကောင်းကြီးမပြေလည်သေးပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ဂျော့ဗ်က သူ့ရဲ့ Porsche အစင်းတစ်ခုထင်သွားတိုင်း အသစ်လဲတယ်ဆိုတာကိုကြားလို့ လီဆာက သူ့ရဲ့ Porsche ကိုတောင်းလိုက်မိတဲ့နောက် ဂျော့ဗ်ရဲ့စကားလုံးတွေ-
နောက်တစ်ပိုင်းမှာတော့ ဘရန်နန်ဂျော့်ဗ်က လီဆာကွန်ပျူတာက သူမမွေးပြီးမှပေးထားတဲ့နာမည်ဟုတ်မဟုတ်မေးတဲ့အခန်းပါ။ အစပိုင်းငြင်းပြီးမှ နောက်ပိုင်း ဂျော့ဗ်ကဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတော့.
I studied my father’s face. What had changed? Why had he admitted it now, after all these years? Of course it was named after me, I thought then. His lie seemed preposterous now. I feltanew power that pulled my chest up.”
ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ ဂျော့ဗ်မကွယ်လွန်ခင် နောက်ဆုံးလတွေအကြောင်းဖြစ်ပြီး စတိဗ်ဂျော့ရဲ့ ဘဝအကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်လာမယ်ထင်ပါတယ်။
ဘ၇န်နန်ရဲ့ဘဝမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုတော့ Amazon မှာ $24.70 နဲ့ pre-order မှာယူလို့ရနိုင်ပြီဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၄ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိလာပါလိ့မ်မယ်။
စတိဂြော့ဗျရဲ့ သမီးဖွဈတဲ့ လီဆာဘရနျနနျကနေ နောကျလမှာ “Small Fry” လို့ချေါတဲ့ကိုယျတှမှေ့တျတမျးလေးတဈခုထှကျဖို့ရှိပါတယျ။ စာအုပျမထှကျခငျမှာပဲ Vanity Fair ကနေ လီဆာဘရနျနနျနဲ့သူမရဲ့ဖခငျနဲ့ခကျခဲလှနျးတဲ့ relationship တှေ၊ သူ့ဖခငျရဲ့နောကျဆုံးနေ့၊ သူမဘဝရဲ့အစခရီးတှအေကွောငျးအသေးစိတျတှကေနေ ကောကျနှုတျဖျောပွခကျြလေးတဈခုကို ထုတျဝလေိုကျပါတယျ။
လီဆာကို ၁၉၇၈ မှာ စတိဂြော့ဗျ့နဲ့ ခရဈဆနျဘရနျနနျကနမှေေးဖှားခဲ့တာဖွဈပီး အားလုံးသိပွီးသားဖွဈတဲ့အတိုငျး ဂြော့ဗျကအစပိုငျးတုနျးက သူဟာလီဆာ့ရဲ့အဖဆေိုတာကို လကျမခံခဲ့ပါဘူး။ သူမ ၂နှဈမရောကျခငျထိ ဂြော့ဗျနဲ့လုံးဝမရငျးနှီးခဲ့ဘူးလို့ပွောရမှာပါ။ နောကျမှ ဖခငျဖွဈကွောငျးစဈဆေးမှုတှလေုပျခိုငျးခဲ့ပွီးမှ လီဆာ့အတှကျထောကျပံ့မှုတှပေေးခဲ့ပါတယျ။ နောကျဆုံးတော့ လီဆာအနနေဲ့ ဖခငျနဲ့တှခေဲ့ရပွီး ကယျလီဖိုးနီးယား မနျလိုပနျးခွံမှာ သားအဖ၂ယောကျတှခေဲ့တဲ့အကွောငျးကို အသေးစိတျလေးဖျောပွထားပါတယျ။
အဲဒီနောကျပိုငျးမှာတော့ ဂြော့ဗျက ဘရနျနနျဂြော့ဗျဆီခဏခဏလာလညျပွီး စကိတျစီးထှကျကွတာတှေ၊ Porsche တူတူစီးကွတာ၊ ညစာအတူစား ခရီးတိုထှကျကွတာတှရှေိပမေယျ့ သားအဖ၂ယောကျရဲ့ဆကျဆံရေးက ကောငျးကောငျးကွီးမပွလေညျသေးပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ဂြော့ဗျက သူ့ရဲ့ Porsche အစငျးတဈခုထငျသှားတိုငျး အသဈလဲတယျဆိုတာကိုကွားလို့ လီဆာက သူ့ရဲ့ Porsche ကိုတောငျးလိုကျမိတဲ့နောကျ ဂြော့ဗျရဲ့စကားလုံးတှေ-
နောကျတဈပိုငျးမှာတော့ ဘရနျနနျဂြေျာ့ဗျက လီဆာကှနျပြူတာက သူမမှေးပွီးမှပေးထားတဲ့နာမညျဟုတျမဟုတျမေးတဲ့အခနျးပါ။ အစပိုငျးငွငျးပွီးမှ နောကျပိုငျး ဂြော့ဗျကဘယျလိုပွနျပွောလဲဆိုတော့.
ကနျြတဲ့အပိုငျးကတော့ ဂြော့ဗျမကှယျလှနျခငျ နောကျဆုံးလတှအေကွောငျးဖွဈပွီး စတိဂြော့ဗျရဲ့ ဘဝအကွောငျး အသေးစိတျသိခငျြစိတျဝငျစားတဲ့သူတိုငျး ဖတျသငျ့တဲ့စာအုပျတဈအုပျဖွဈလာမယျထငျပါတယျ။
ဘ၇နျနနျရဲ့ဘဝမှတျတမျးစာအုပျကိုတော့ Amazon မှာ $24.70 နဲ့ pre-order မှာယူလို့ရနိုငျပွီဖွဈပွီး စကျတငျဘာလ ၄ရကျနမှေ့ာ ထှကျရှိလာပါလိ့မျမယျ။